IRyanair izuza ukhuphiswano ngeBoeing 737 MAX
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziQhelekileyo zaseIreland » IRyanair izuza ukhuphiswano ngeBoeing 737 MAX
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Utyalo mali • Iindaba eziQhelekileyo zaseIreland • iindaba • Xanduva • Technology • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ngaphandle kwesiseko se-Boeing 737 MAX ngo-2019 ngaphezulu kwenkxalabo yezokhuseleko, iRyanair yathethathethana ngokuthengwa kweeyunithi ezingama-210, ubuninzi bezili-12 ezisebenza ngexesha lehlobo lowama-2021.
I-Boeing 737 MAX iya kunika iRyanair ithuba elihle lokukhuphisana kule minyaka mihlanu izayo.
I-Boeing 737 MAX iya kuphucula isindululo seRyanair ngokunciphisa ukusetyenziswa kwepetroli nge-16% kwisihlalo ngasinye.
I-Boeing 737 MAX iya kwenza amandla ongezelelweyo e-4% yabakhweli.
I-Ryanair ekugqibeleni yabhengeza ukufika kwayo okokuqala iBoeing 737 MAX jet, echazwa ngumthuthi wexabiso eliphantsi 'njengomtshintshi womdlalo'. Ngaphandle kokusekwa kwenqwelomoya kwi-2019 ngaphezulu kwenkxalabo yezokhuseleko, Ryanair kuthengwe-thethwana ngeeyunithi ezingama-210, ubuninzi bezili-12 busebenza kwixesha lehlobo lowama-2021. Inqwelomoya iya kuphucula isindululo seRyanair ngokunciphisa ukusetyenziswa kwepetroli nge-16% kwisihlalo ngasinye, ukunciphisa ukukhutshwa kwengxolo ngama-40%, kunye nokwenza amandla ongezelelweyo e-4% yabakhweli - konke oku kuya kunika iRyanair ithuba elihle lokukhuphisana kule minyaka mihlanu izayo.
Izibonelelo zokuzinza kwenqwelomoya ziya kudibana notshintsho olukhethwa ngabathengi lweemveliso ezinobungozi kokusingqongileyo. Ngokophando lwabathengi lwe-Q1 2021, i-76% yabaphenduli bathi babehlala 'behlala', 'rhoqo', okanye 'ngandlela thile' bephenjelelwa bubume bendalo bemveliso, beqaqambisa umnqweno wenqwelomoya ezinzileyo. Ngenxa yoko, iRyanair izifumana ikwindawo eyodwa ngokudibana neendlela zabathengi banamhlanje kunye nemarike yaso yemveli ngokunikezela ngexabiso eliphantsi. Uvoto lweshishini lwamva nje luxhasa olu luvo kwiindleko eziphantsi, nge-53% yabaphenduli besithi indleko yeyona nto ibaluleke kakhulu xa ukhetha i-airline.
Ryanair uyiqondile kwaye wakha uphawu lwayo ngokunganikezeli ngexabiso eliphantsi kuphela, kodwa ngokunikezela ngenkonzo eluhlaza kunye nexabiso eliphantsi elinokubangela iinkonzo kubathengi bayo. Ngenxa yoko, imveliso ayizukutsala kuphela abahambi abazi okusingqongileyo, kodwa iya kuqhubeka nokuhlangabezana nemarike yayo engundoqo malunga nexabiso eliphantsi.
Inkxalabo kwezokhuseleko ihleli ilandela ingozi embi yeLion Air ngo-Okthobha u-2018 kunye ne-Atiopian Airlines yengozi ngo-Matshi 2019. Ezi ziganeko zibangele ukuba ezinye iinqwelomoya zirhoxise iiodolo kwaye zifune imbuyekezo. I-Ryanair, nangona kunjalo, ihlala izinikele kuyo iBoeing I-737 MAX kwaye, ngokwe-CEO uMichael O'Leary, inkampani ikhusele isaphulelo sexabiso 'esithobekileyo' kwi-odolo.
Inqwelomoya yaphononongwa kanobom yi-Federal Aviation Administration (i-FAA) kule minyaka mibini ibisisiseko kwaye isigqibo sokuyithatha siyise esibhakabhakeni kwakhona khange sithathwe kancinci.
Ekugqibeleni, iindleko zokusebenza ezisezantsi zenqwelomoya zilungele ngokupheleleyo kwimodeli yeshishini likaRyanair. Uninzi lweenqwelomoya azikwazi ukuthenga iinqwelomoya okanye ukuzibophelela kuqeshiso ngenxa yobhubhane, zibashiye nenqwelomoya endala. Njengoko iRyanair ijongana nesantya sokuhamba emva kwendyikityha yokufa ngo-2022 ngexabiso eliphantsi, kodwa elinengeniso eninzi, iya kuba sele ifumene inzuzo ecacileyo yokhuphiswano kwezinye iinqwelomoya.
I-British Airways ibuyela eBudapest kunye neLondon ...
IMarriott yandisa ukuQatshelwa kwayo ngokuRhweba ngabantu ...